"Xukunka Maxkamaddu Fiqi Cusub Ayuu Soo Koredhiyey" • Oodweynenews.com Oodweyne News
“Xukunka Maxkamaddu Fiqi Cusub Ayuu Soo Koredhiyey”
Kiiniya dhib ayaa haysata: iyada iyo Tanzania xadka u dhexeeya ayaa laynku ku soo qalloocsamay. Soomaaliya laynkeeduna wuu ku qalloocaa sida juquraafi ahaan dhulku u samaysan yahay darteed. Sidaasdarteed, laynka in si dherer ah (parallel) loo calaamadiyo ayay doonaysay Kiiniya si ay u hesho bad. Taas weeye muranka wayn ee jiray ee hada la diiday. Waxa ay Maxkamaddu go’aamisay inaan laynka si dherer ah loo dhigi karin. Sidaas ayay ku wayday Kiiniya waxa ay doonaysa. Intan dan kama laha, wax wayna uma tarayso.
Continental Shelf ku waa arin cilmi ahaan kakan oo saynis iyo sharci iskugu jira. Dhawr sanadood ka hor ayaan ka qayb galay kooras lagu barayay qareenno Afrikaan ah (Afrikaanku ma bartaan waayo dhulkiiba kama ay faa’iidaysan oo bad uma jeedaan). Dadka aannu isku kalaaska ahayn waxa ka mid ahaa qareen Kiiniya u soo dirsatay oo ka tirsanaa Wasaaradda Arimaha Debedda. Macallimiintu waxa ay ahaayeen ICJ iyo Gudida Qaybisa Continental Shelf ka. Waxa iska caddaa inaan Kiiniya sinaba ku helli karin layn dherer ah.
Hadaba, fahamka aynu ka haysanno Continental Shelf ku sax maaha. Waqti dheer ayay qaadan doontaa inaynu si fiican u fahamno oo dabadeed laga faa’iidaysto. Ma hubo in badda Soomaaliland leedahay Continental Shelf, hadii ay leedahay murankeedu wuu ka adkaanayaa ka Kiiniya sababta oo ah Yemen oo aynu iska soo horjeedno (opposite state) inta inoo dhaxaysa way yar tahay oo si cad looma qaybsan karo. Jibuuti oo aynu lafteeda isku dhegsanahay (adjacent State) damac ayaa ku jira. Iska jira heshiisyada aad la gashaan Jibuuti. Your friend could be your enemy. Who knows when.
Xukunka Maxkamaddu soo saartay laftiisu fiqi cusub ayuu soo kordhiyay. Mudooyinka soo socda qoraallo cilmo (scholarly articles) ayaan hubaa inay khubaradu ka qori doonto – kuwo raaca, kuwo diida iyo kuwo si kale u dhiga.
Garyaqaan Guulleed Axmed Jaamac (Guuleed Dafac).